वाह ! रारा : यात्रा संस्मरण -::DainikPatra
वाह ! रारा : यात्रा संस्मरण
विगत केही वर्षदेखि नै कर्णालीको मुगुस्थित रारा ताल घुम्न जाने योजना बन्दै र थन्किँदै थियो । फेरि हामी योजना बनाउने र गफ गर्नमै मजा पनि त मान्छौं । किनकि कुरामा रमाउने हाम्रो संस्कार नै हो । हामी कुरा गर्छांै, गफ गर्छांै, सपना देख्छौं अनि त्यसैमा रमाउँछौं । तर, त्यो सपनालाई सार्थकतामा परिणत गर्न कत्ति पनि परिश्रम गर्दैनौंं, बरु पुनः काक्ताली लागेर सपना साकार भएको कल्पना गर्न पुग्छौं । अनि फेरि रमाउँछौं । बस् कल्पना गर्नु अनि कल्पनामै रमाउनु हाम्रो नियति जो बनेको छ । हो अहिलेसम्म यो पंक्तिकारको रारा जाने सपनाको हविगत पनि यही नै थियो । तर, यसपाली बुटवलका मित्र पंकज राईको साथले यो सपना पूरा भएको छ । हो, यसपाली भने पंक्तिकारको रारा अर्थात् धर्तीको स्वर्ग देख्ने सपना पूरा भएको छ ।
घुमफिरले ताजगी मात्र पैदा गर्दैन किन्तु नयाँ भूगोल, समाज, परिवेश अनि पर्यावरणको भरपुर ज्ञान पनि दिन्छ । यहाँनेर एउटा पुरानो गीतको भाका सम्झन्छु । ‘बुढापाकाहरु भन्थे नि लै लै, हिंडेदेखि छेउ लाग्छ बसे लेउ लाग्छ ।’ हो, जब हिंडिन्छ, जीवन र जगतको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाइन्छ । देश र दुनियाँ देखिन्छ । अनि त्यो प्रत्यक्ष देखाई, सिकाई र अनुभवले जीवनलाई ऊर्जा दिन्छ । त्यसैले समय मिल्योका कतै न कतै हिंडिहाल्न मन लाग्छ । यसपाली पनि यो दसैंको लामो विदालाई घुम्ने प्रयोजनको लागि सदुपयोग गर्ने मनसुवाले यही समयमा रारातिर लाग्ने निश्कर्ष निकालियो । त्यसो त धेरै साथीहरुको रोजाई दसैंपछि जाउँ भन्ने पनि थियो । तर, दसैंको विदामा घुमफिर गर्नुको मज्जा नै बेग्लै हुन्छ । त्यसैले बुटवलबाट मित्र पंकज राई र यो पंक्तिकारको टोलीले कर्णालीको मोटरसाइकल यात्रा सुरु गर्यो ।
हामी दैलेखको पाल्तडा भन्ने ठाउँमा खानाखानको लागि रोकियौं । जुम्लाबाट ल्याइएको च्याङ्ग्रा यसपटकको तरकारी भयो । खाना खाइवरी पुनः यात्राले गति लियो । कर्णालीको तिरैतिर सुन्दर हरियाली अनि लहलह धानबालीका फाँटहरु अबको दृष्य थिए । त्यस्तै साँढे तीन बजेतिर हामी कालिकोटको सदरमुकाम मान्मा बजार पुग्यौं र त्यहाँ चिया पियौं । डाँडाको थुम्कोमा रहेको मान्मा बजार पुग्दा निकै उचाइमा पुगेको भान हुन्थ्यो । त्यहाँ निरन्तर रुपमा चल्ने वायुले वैकल्पिक ऊर्जाको संभावनालाई संकेत गरेको थियो । यद्यपि हावाबाट बिजुली निकाल्ने कुरा त्यत्ति सहज भने छैन । लागतको हिसाबमा त्यो हाइड्रोभन्दा निकै महंगो गर्छ शायद ।
त्यसदिन कालिकोटकै नाग्माघाट पुगेर बास बस्यौं । पढेको थिएँ, जुम्लाको रातो मार्सी चामलको बारेमा । त्यसैले होटेलवालालाई त्यही चामलको भात पकाउन भनियो । होटलवाल्नी साहुनीले खोजखाज गरेरै भए पनि त्यही चामलको भात पकाएर खुवाईन् । पहिलोपटक रातो मार्सी पेटमा पर्दै थियो । लेकाली भेडाको मासु र रातो मार्सीको भात खाएर तिला नदीको गड्गडाहटसँगै हामी त्यहीं बास बस्यौं । भोलिपल्ट बिहान सवेरै लागियो गमगढीको उकालोतर्फ । राती हल्का रुपमा परेका पानीले गमगढी सडक केही चिप्लो भएको महशुस हुन्थ्यो । हामी विस्तारै सावधानीका साथ नाग्माघाटबाट हिमा खोलाको तिरैतिर कच्ची र चिप्लो सडकको यात्रा अघि बढ्यो । ९३ किलोमिटरको नाग्मा–गमगढी सडकखण्ड पार गर्न हामीलाई लगभग ६ घन्टा लाग्यो ।
त्यस रात त्यही रारा किनारमै रहेको एउटा होटेलमा बितायौं । भोलिपल्ट बिहान दसैंको दिन होटेलमा पाकेको सेलरोटी र चिया खाएर हामी फर्कियौं । फर्किंदा चाहिं डुंगामाफर्त रारा तरियो । आधा घन्टा भन्दा बढी समय लाग्दोरहेछ रारालाई छिचोल्न । डुंगाबाट रारा नियाल्दा भने साँच्चिकै स्वर्गीय आनन्तको अनुभूति भयो । राराको विशालता र सुन्दरता त राराको मध्य भागमा पुगेपछि पो देखिंदो रहेछ । निलो आकाशमा कावा खाइरहेका केही थान सेता वादलका टुक्राहरु, बिहानको पारिलो घाम, राराको गाढा निलो रंग, शान्तसँग बिनाकुनै अवरोध अविछिन्न रुपमा चलिरहेको पानीको तह, वरिपरीको हरियालीयुक्त पहाडका टाकुराहरु । बस् मध्यभागबाट देखिएका राराको सुन्दरताका बान्कीहरु यिनै थिए । हामी राराको यही सुन्दरतालाई मानसपटलमा सजाउँदै आआफ्नो झोलीतुम्बा बोकेर फिर्ता भयौं ।